Umatshini weLaser wamandla weLaser - Abavelisi beLaser baseLaser abavelisi, abaXhasi
Sinikezela ngokwahluka-hlukeneyo ziikristale zelaser ezikumgangatho ophezulu, ezinee-concentrations ezahlukeneyo, ion ion doping; Ukubalula ngokwezicelo, kubandakanya iNeodymium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Nd: YAG), Erbium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Er: YAG), Holmium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Ho: YAG) ； Erbium kunye ytterbium co-doped phosphate glass (Er: Iglasi) njl.njl, kuyahluka ukhetho kunye nezisombululo ezibonelelwe yi-DIEN TECH.
Nd, Cr: Amakristali e-YAG
I-laser ye-YAG (yttrium aluminium garnet) inokufakwa kwi-chromium kunye neodymium ukulungiselela ukonyusa ukubonwa kwe-laser. I-laser ye-NdCrYAG yindawo eqinileyo yelaser. I-Chromium ion (Cr3 +) inebhanti yokufunxa ebanzi; ithatha amandla kwaye iwadlulisele kwi-neodymium ions (Nd3 +) ngendlela yokusebenzisana kwe-dipole-dipole. I-wavelength ye-1.064 µm ikhutshwa yile laser.
Nd: YAG crystal intonga isetyenziswa kumatshini wokumakisha weLaser kunye nezinye izixhobo zelaser.
Zizo kuphela izinto eziqinileyo ezinokusebenza ngokuqhubekayo kubushushu begumbi, kwaye yeyona ikristale yokusebenza kweyona laser ibalaseleyo.
Er: YAG Amakristali
I-Er: i-YAG luhlobo oluhle kakhulu lwe-2.94 um laser crystal, esetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yonyango ye-laser kunye nezinye iinkalo. Er: YAG yikristale laser yeyona nto ibaluleke kakhulu ye-3nm laser, kwaye ithambeka elinobuchule obuphezulu, inokusebenza kwigumbi lobushushu be-laser, i-laser wavelength iphakathi komda webhendi yokhuseleko lomntu, njl. iye yasetyenziswa ngokubanzi kutyando endle zonyango, ubuhle bolusu, unyango lwamazinyo.
Ho: YAG Ho3+ Ii-ion ezifakwe kwi-insulating laser crystals zibonise ii-laser eziphakathi kweendlela ezili-14, ezisebenza ngeendlela zethutyana ukusuka kwi-CW ukuya kwimowudi evaliweyo. Ho: I-YAG iqhele ukusetyenziswa njengeyona ndlela isebenzayo yokuvelisa i-2.1-μm laser emission kwi 5I7- 5I8 utshintsho, lwezicelo ezinje nge-laser sensing kude, utyando kwezonyango, kunye nokupompa i-Mid-IR OPO's ukufezekisa ukukhutshwa kwe-3-5micron. Iinkqubo zokumpompa ngokuthe ngqo, kunye ne-Tm: Inkqubo yokumpompa i-Fiber Laser ibonakalise ukusebenza ngokuthambeka kwe-hi, ezinye zisondela kumda wethiyori.
Ce: YAG Amakristali
Ce: YAG yikristale luhlobo olubalulekileyo lweekristal zescillillation. Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokucheba ezingaphiliyo, Ce: YAG yikristale ibambe ukukhanya okuphezulu kunye nokukhanya okuthe gabalala. Ngokukodwa, incopho yayo yokuphuma ingu-550nm, ehambelana kakuhle nobukrelekrele bokubona ubude be-silicon photodiode. Yiyo loo nto ilunge kakhulu kwizikrelemnqa zezixhobo ezithathe i-photodiode njengezikhupheli kunye nezikrelemnqa zokufumana ukukhanya kwamasuntswana. Ngeli xesha, ukusebenza ngokudibanisa okuphezulu kunokufezekiswa. Ngapha koko, i-Ce: I-YAG inokusetyenziswa njengesiqhelo njengephosphor kwiityhubhu zemitha yeekathode kunye neediode ezimhlophe ezikhanyisa ukukhanya.
CTH: YAG Amakristali
I-Ho, Cr, Tm: YAG -yttrium aluminium garnet laser crystals ene-chromium, thulium kunye ne-holmium ions ukubonelela nge-lasing kwi-2.13 microns zifumana izicelo ezingaphezulu nangakumbi, ngakumbi kumzi-mveliso wezonyango. usebenzisa i-YAG njengombuki zindwendwe. Iipropathi ze-YAG zomzimba, ezokufudumeza kunye nokubonakalayo ziyaziwa kwaye ziyaqondwa ngabo bonke abayili be-laser. Inezicelo ezibanzi kuqhaqho, kugqirha wamazinyo, kuvavanyo lomoya, njl.